News Collection: 'प्रेमविनाको यौन र यौनविनाको प्रेमको कुनै अर्थ हुँदैन ।'
'प्रेमविनाको यौन र यौनविनाको प्रेमको कुनै अर्थ हुँदैन ।'
मौसमले 'च्यालेन्ज गरिरहेको थियो, तर दीक्षा कुँवरलाई त्यसको कुनै वास्ता थिएन । दुई चलचित्रकी नायिका भैसकेकी तथा म्युजिक भिडियोमा अफरको ताँती लागिरहेको बेला उनलाई सेलिब्रेटी हुने भूत चढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसैले दीक्षाले 'कुल मौसममै 'हट तस्बिर खिचाइन् ।
टिनएज पार गर्नै लागेकी दिक्षा ग्ल्यामरस हुन मन पराउँछिन् । यो मामिलामा धेरै नायिकाले व्यक्त गर्ने 'कथाले मागेसम्म एक्सपोज हुन्छु ।' भन्न पनि उनी चुक्दिनन् । उनले कुरा घुमाउँदै भनिन्- 'आफूलाई जस्तो पहिरन म्याच गर्छ त्यही लगाउने हो, त्यतिसम्मै खुल्ने हो ।' कसैले डेटिङको प्रस्ताव राख्यो भने नि ? 'एक-अर्काको भावना साटासाट गर्न कसैले असल नियतले प्रस्ताव राख्छ भने नकार्ने कुरै छैन', दीक्षाले बताइन् । प्रेम र यौन ?
दीक्षा खुलेरै प्रस्तुत भइन्, 'प्रेमविनाको यौन र यौनविनाको प्रेमको कुनै अर्थ हुँदैन ।' + २ अध्ययनरत दीक्षालाई प्लेब्वाइ र कलंक (भोजपुरी) चलचित्रमा देख्न पाइनेछ ।